मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको बाबुरामद्धारा स्वीकार, यस्तो लेखेका छन्। – hamrosandesh.com
मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको बाबुरामद्धारा स्वीकार, यस्तो लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले भेटेको जसपाका अध्यक्ष तथा पूर्ब प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले स्वीकार गरेका छन् । उनलाई नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले राती राती प्रधानमन्त्री भेटेको र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेको भन्ने लगाएको आरोपको उत्तर दिँदै उक्त कुरा स्वीकार गरेका हुन् ।
डा भट्टराईले आफुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर पुर्व प्रधानमन्त्रीबाहेकका ब्यक्रीबाट प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेपछि आफुलाई नै प्रस्ताव गरेको बताएका छन् ।
नेता बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीले एउटामात्र साँसद भएको ब्यक्ती तपाई डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कसरी सकिन्छ रु भन्ने प्रश्न गरेको आरोप लगाएको मिमियामा सार्बजनिक भएको थियो ।
राती राती भेट गर्न बालुवाटार जाने अनि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलो स्वरमा बिरोध गर्ने भन्ने आरोप डा बाबुराम भट्टराईलाई लागेपछि नेता बस्नेतले उक्त कुरा खुलासा गरेका थिए ।
डा भट्टराईले आफूले केपीशर्मा ओलीलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको दाबी गरेका छन् ।
डा भट्टराईको ट्वीटः प्रधानमन्त्रीले दूतमार्फत बोलेकाले बोल्नैपर्ने भयो महाविपत्ति उन्मुख देशलाई निकास दिन मैले ब्यक्ति ओली हैन प्रम ओलीलाई भेटेकै हो। मैले वर्तमानरपूर्व प्रम बाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊॅ भनेकै हो। वहॉले नमानेपछि अरूलाई नभनेको हुॅ। अझै पनि धारा ७६ ५ बमोजिम बनाउन सकिन्छ।सोचौं‌‌।
मध्यरातमा बाबुराम किन छिरे बालुवाटार ?
नेकपा एमाले का सांसद तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले यो दश दिनको अवधिमा जसपाका नेता डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुई पटक भेटवार्ता गरेको खुलासा गरेका छन् । भट्टराईले राति १ बजे बालुवाटार पुगेर आफूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाईदिन आग्रह गरेको उनको दाबी छ ।
उनले भने, यो दश दिनमा बाबुरामजीले प्रधानमन्त्रीलाई दुई पटक भेट्नुभयो, त्यो पनि राति १ बजे । उहाँले आजको दिनमा राष्टिय सरकार बनाउनुपर्छ, यसको नेतृत्व मैले लिनुपर्छ । आज म ६८ वर्षको भएँ, ७० वर्षसम्म राजनीति गर्ने मेरो चाहना हो । तपाईंले त्यो मेरो लागि पहल गरिदिनुहोस । त्यो तपाईबाहेक अरु कसैले गर्न सक्दैन् । प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाको हामीले नाडी छाम्यौं भन्नुभयो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो अरे भने मेरोविरुद्ध तपाईँ, प्रचण्ड, नारायणकाजी, उपेन्द्रदेखि रामचन्द्रसम्म लाग्नुभाछ, अनि म पनि मेरो विरुद्धको अभियानमा लाग्ने, म चाहीँ १२१ सांसद भएको पार्टीको नेता, महन्थ ठाकुर २०, २१ जनाको प्रतिनिधि, उपेन्द्र यादव पनि १३, १४ जनाको प्रतिनिधि, अनि तपाई चाहीँ कति जनाको प्रतिनिधि रु तपाईँबाहेक को छ तपाईको प्रतिनिधि ?
प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने महत्वकांक्षा रहेपनि त्यो चाहना पूरा हुन नसकेको पनि उनले बताए । उनले वर्तमान सरकारले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न धेरै राम्रो भूमिका खेलेको पनि जिकिर गरे ।